CUNTO ANTHRACNOSE: SHARAXAADDA CUDURKA IYO HABABKA DAAWEYNTA, SAWIRRADA DHIRTA CUDURKA QABA IYO HABABKA XAKAMAYNTA IYO KA HORTAGGA - BEERTA
Waa maxay sababta canabtu u xanuunsaneyso anthracnose iyo sida loo daweeyo?
Caadi ahaan anthracnosis waxay ku dhacdaa meelaha leh cimilada diiran iyo qoyan: koonfurta Russia, Moldova, Ukraine iyo Central Asia. Dhawaan, wuxuu horey u soo joogay Belarus iyo dhinacyada dhexe.
Tani waa cudur aad u khatar ah kaas oo saameeya noocyo badan oo canab ah oo adkaysi u ah xagta iyo oidiyoon iyo aan lagu daweyn fungicides. Anthracnose ayaa ku dhuftey dhammaan qaybaha geedka: caleemaha, caleemaha iyo berry. Sidee ha u seegin calaamadaha cudurka iyo in ay u aqoonsadaan marxaladda hore?
Calaamadaha lagu gooyo anthracnose canab
Haddii aadan bilaabin waqtigii si aad u qaaddo tallaabooyin ka hortag ah, markaa waxaa jira fursado kasta oo ka soo baxaya cudurkan aan fiicneyn. First of dhan, caleemo anthracnose ayaa la saameeyaa. Marka hore, waxay ku daboolaan dhibco yaryar oo madow, taas oo mararka qaarkood dib ugu noqoto meelo yaryar oo jilicsan oo leh xuduudda madow.
Waad ku mahadsan tahay dhibcahan, cudurku wuxuu helay magac kale: Cagaarshow ama Dhaawac kudhaca.
Muddo yar ka dib, dhibcahani waxay bilaabaan inay muuqdaan caleemaha. Badanaa waxaa u nugul cudurka caleemaha yaryar iyo afkoda.
Calaamadahaasi si dhakhso ah ayey u koraan, iyagoo daboolaya dhammaanba qaybta xaashida, iyo soo iibso qaraash qarsoodi ah oo casaan ah. Caleemo khafiif ah ayaa qalajisa oo dib udhaca. Ma aha oo kaliya beergooyska cayayaanka ah, inta badan dhirta jirran ayaa dhimata.
Caleemaha cudurka qaba noqdaan waqti dheer dhibco madowoo gudaha u soo baxaya, ballaadhiyaan oo noqdaan kuwo madow. Goobaha saamoobay waxay bilaabaan inay jabaan. In abaartu dheer, caleemaha qalalan iyo jebi, iyo in hawada qoyan ay qudhmi. Badanaa waxaa ku dhaco anthracnose cawska canabka ah, qabatinka iyo ubaxyada.
Iyada oo cudur ah ee kooxo, on berry wuxuu u muuqdaa mid furan oo ku wareegsan wareegga wareegga ee midab madow leh astaamaha casriga ah. Sababtoo ah qaabka aan caadiga ahayn ee dhibcahan, anthracnose waxaa badanaa loo yaqaannaa shimbirta indhaha. Waqti ka dib, berry, crack, qalalan iyo dhaco.
Anthracnose si dhakhso ah ayuu u faafaa wuxuuna burburin karaa ilaa 80% dhammaan dalagga. Si aad ula macaamilato waa mid aad u adag, waxaa fiican inaadan ogolaan muuqaalka cudurka.
Anthracnose waa cudurka fungal. Wareegtadu waxay ku noolaan kartaa geedka waqti dheer, qiyaastii 5-6 sano mana muujiyo lafteeda, illaa heer gaar ah. Fungus overwinters on caleemaha iyo caleemaha iyo tooso guga hore. Anthracnose si dhakhso ah ayuu u firfircoonaa qoyaan badan oo ku saabsan + 25-35S.
Hawlgalkeeda muuqaalka ayaa sidoo kale u adeega:
roobab culus oo roobab casri ah;
dhaawaca farsamada ee caleemaha marka ay ku haboontahay;
la'aanta Bacriminta Fosfatiyada Phosphate;
ciid ah oo aad u badan ama saliid leh.
Marka lagu faafiyo hal warshad, anthracnose ayaa isla markiiba loo wareejiyaa dhinaca kale. Waxay ku faafi kartaa caawinaadda dabaysha, roobka iyo qalabka beerta.
Sidee loo daaweeyaa, haddii cudurku aan laga fogeyn karin? Waxaa lagama maarmaan ah in si deg deg ah looga saaro oo u gubo caleemaha saameeya iyo caleemaha iyo daaweeyo dhirta leh xal 3% oo ah isku darka Bordeaux. Mashiinka ugu horeeya waa in la fuliyaa marka caleemuhu gaadho dherer 7-10 cm, iyo kan labaad ka dib 2 asbuuc, laakin xal 1% ah.
Inta lagu jiro ka shaqeynta, waa lagama maarmaan in la hubiyo in daroogadu hoos u dhacdo dhinaca hoose ee xaashidalaakiinse ma uu tegin. Tani waxay wanaagsan tahay in la isticmaalo buufinta leh godad yar. Daaweynta waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo subaxda hore ama fiidkii si looga fogaado sunta.
Ka dib markii 2 todobaad kale, waa in la buufiyo canab ah oo leh copper sulfate.
Nasiib darro daaweynta dadweynaha ee dagaalka ka dhanka ah cudurkan ma caawiyo, iyo haddii uu cudurku socdo, waxaad ku qasbanaan doontaa inaad u geysatid "garaacis culus" - fungicides nidaamsan. Si fiican ula qabsasho anthracnose Ridomil, Abiga-Peak, Fundazol, Kartotsid, Ordan, Skor iyo Acrobat.
Recently, daaweynta cudurka anthracnose ayaa si weyn loo isticmaalay. diyaarinta nafleyda: Gaupsin, Mikosan iyo Planriz. Hawlaha waa in si joogto ah loo sameeyaa, iyada oo ay u dhaxeyso 10-14 maalmood oo hubso in aad yareyso waraabinta warshadda. Waa hagaag, iyo, dabcan, ha ilaawin tallaabooyinka ka hortagga.
Si looga hortago dhacdada cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo daryeelo beerta canabka ah. Lama ogolaan karo dhirta baadiyaha.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo wakhti goynta ah iyo jarjarid. Qalabka iyo qalabka waa in lagu daaweeyaa xalka adag ee kaneecada. Xalka isla waa la baari karaa iyo caleemaha canab.
Guga, ka hor ubax, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo 1% isku dhafka Bordeaux ama oxychloride copper. 2 toddobaad kadib, daaweynta ayaa la soo celiyaa. Daawada budada ah ee budhcada ayaa si fiican u caawisa.
Dayrta manjooyin dhammaan qaybaha fog ee warshadda waa la gubay. Si joogto ah u ciidda furfuraybiyaha iyo mulch U hubso inaad isticmaasho Bacriminta adag, oo leh qiyaasta kalsiyumka iyo fosfooraska, qodo inta u dhaxaysa safka iyo burburinta haramaha. Ka dib markii roobab culus oo dufan leh, isku dar ah Bordeaux ama fungicides ayaa isla markiiba la daweynayaa.
Gaar ahaan waxay ku dhacdaa noocyo anthracnose sida:
Wax yar u nugul noocyada caabuqyada:
Waa in la xusuusnaado in noocyada canabka ah aysan saameyneynin caarada, kalluunka casaanka iyo oidiyoomka si fiican u heli kara anthracnose. Si looga hortago tan, waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin ka hortag ah si loo hubiyo in beerta beertu ay tahay mid si qotodheer u leh, daryeel caafimaad leh.
Anthracnose - cudur darantaas oo dumin kartaa beerta canabka oo dhan maalmo ah. Haddii gobollada kala duwan ee hore ay dhibaatadan soo gaartay, iyada oo jawi diiran iyo qoyan, haddana juqraafi ahaan juqraafiyadu way sii ballaarantaa oo ma jirto hab wax loo qaban karo iyada oo aan la helin tallaabooyin difaac ah.
Fiidiyowga waxtar leh: